Love Archives - Page2of 35 - Askstyle
ယောက်ျားတစ်ယောက်က စွန့်ပစ်သွားလို့အသဲကွဲစရာမလိုပါဘူး… ယောက်ျား တစ်ယောက် ပစ်သွားလို့ အသဲကွဲတယ် ဆိုတာ ကိုယ့်အတွက်တော့ ရယ်စရာပါ ။ ကိုယ်က အချစ်ကြီးသလို အစွဲလန်းကြီးတယ်။ သစ္စာတရား ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့အသက်လို တန်ဖိုးထားတာ ။ ကိုယ့်အချစ်မေတ္တာကို အောက်တန်းစား အဆင့်နဲ့ လာအသုံးချသွားရင်လည်း သေတောင် ခွင့်မလွှတ်ဘူး။ ဒါ ကိုယ့်တန်ဖိုးလေ ။ ကိုယ့်ကိုယ်အပေါ်ယံနဲ့…Read more →
မိန်းကလေးတစ်ယောက် ချစ်စရာကောင်းမကောင်း ဒီလိုလေးသိနိုင်ပါတယ်..💘 မိန်းခလေးတစ်ယောက် Original လှတာ ဟုတ်/ မဟုတ် သိချင်ရင် သူမရဲ့ မျက်ခုံးမွှေးကိုသာ အရင်ရှိုးလိုက်ပါ...။ အပြောင်ရိတ်ထားပြီး Eyeliner နဲ့ ကနုတ်ပန်း Style ခြယ်သထားတာ မှော်ကားထဲက ကဝေမလိုလို ပြင်ထားတာ Avatar ကားထဲကမင်းသမီးလို ဒုံးတိလုပ်ထားတာ ဓားနဲ့ခြစ်ထားသလို စတန့်ထွင်ပုံဖော်ထားတာ... ပြု ပြင်ပြီးမှ ရတဲ့အလှကျ Or…Read more →
“အမေ့ကို တန်ဖိုးထားသလို မိန်းမကိုလည်း တန်ဖိုးထားကြပါ” ညတစ်ညရဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပါ။ ကျွန်တော် ကုတင်ပေါမှာ မအိပ်ချင်သေးပဲ လှဲလိုက်မိတယ် ။ အသင့်အိပ်ပျော်နေရှာတဲ့ ကျွန်တော့ရဲ့ အားနွဲ့နွဲ့ ချစ်ဇနီးလေးရဲ့ နူးညံလှပတဲ့ မျက်နှာလေးကို ကျွန်တော်သေချာ ကြည့်နေရင်းကနေအတွေးတစ်ချို့ဝင်လာပြီး ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထဲ ကျွန်တော့ဟာကျွန်တော် တွေးနေမိတယ် … … : မိန်းကလေးဆိုတာ ဘယ်လိုပါလိမ့် ? ကျွန်တော်နဲ့ မင်္ဂလာမ​ဆောင်ခင်​က…Read more →
မိန်းကလေးတွေက ချစ်ပီဆိုရင် ဒါတွေလုပ်ကြတယ် 😝
မိန်းကလေးတွေက ချစ်ပီဆိုရင် ဒါတွေလုပ်ကြတယ် 😝 😝😜😝😖😖 ၁- ကိုက်တယ်.....😬😬 😊(အမှတ် အသားလေး ပေါ်ရုံလောက်ထဲပါ 😖) ၂- ပါးပိတ် ရိုက်တယ်😕👋.. (ဖွဖွလေးနော်😜) ၃- အာဘွား ....ပေးတယ် ....😙😙 ၄- ဗိုက်ခေါက် လိမ်ဆွဲတယ်.... 👏👏😂😂 (နာနာလေး😖😖) ၅- ဆံပင်လေးပါ ဆောင့်ဆွဲတယ် (အသာလေး....😨😨 )😂 ၆-…Read more →
ချစ်ရင် ကို့နောက်လိုက်ရဲလား.. ကို = ချစ် ကို့ကို ချစ်လား ချစ် = ချစ်တာပေါ့ ကိုကိုရယ် ကို = ချစ်အာ့ဆို ကို့နောက် လိုက်ရဲလား ချစ် = လိုက်ရဲတာပေါ့ ကိုကိုရယ် ကို = တစ်ကယ်လား ချစ်လေး ချစ် = တစ်ကယ်ပေါ့ ကိုကိုရယ် ကို =…Read more →
ညီမလေးဖတ်ဖို့... ========= ညီမလေး…. လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေးခေါ်ပါ။ မိန်းမဆိုတာ... မေတ္တာအရရော၊ ငွေရေးကြေးရေး အရပါ သူတစ်ပါးကို နည်းနည်းပါးပါး အားကိုးလို့ ရရင်ရမယ်။ ဒါပေမဲ့.... အကောင်းဆုံးကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားကိုးခြင်းပါပဲ။ ညီမလေး… စာများများဖတ်ပါ။ များများ လေ့လာပါ။ ပန်းအိုးဆိုတာ ကျကွဲလွယ်လွန်း တတ်သလို လှပခြင်းဆိုတာလည်း ရင့်ရော်လွယ်လွန်း လှပါတယ်။ ညီမလေးရဲ့ ရင်တွင်းအလှ နဲ့…Read more →
တဏှာကြီးသူတွေကသာ ဖောက်ပြန်ကြတယ်။ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ရှိလျက်နဲ့ ဖောက်ပြန်ကြတဲ့သူတွေက တဏှာကြီးတဲ့သူတွေလို့ကျွန်မကတော့သတ်မှတ်နားလည်မိတယ်။ သူတို့ရဲ့ တဏှာ စိတ်ကြောင့်သူတို့အိမ်ထောင်ဘက်တွေထက် ငယ်တဲ့သူကို ပိုပြီး လုိုချင်တာ။ သူတို့ရဲ့တဏှာစိတ်ကြောင့် မိသားစုအပေါ်ရက်ရက်စက်စက် ပြုရက်တာ။ သူတုို့ရဲ့တဏှာစိတ်ကြောင့် လူပုံအလယ်မှာ အရှက်ကွဲခံပြီး ဖောက်ပြန်ရတာ။ သူတုို့ရဲ့တဏှာစိတ်ကြောင့် မိသားစုနဲ့ အသိုင်းဝိုင်းကနေ အကျဉ်ခံရတာ။ အဲလောက်ထိ တဏှာကို မက်နေတဲ့အတွက် မစွန့်နိုင်တဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့ အကုသိုလ်ကလည်း ကြောက်စရာပါပဲ။ ဒါ့အပြင်…Read more →
ယောက်ျားတစ်ယောက် ပစ်သွားလို့အသဲကွဲစရာမလိုပါဘူး.. ယောက်ျား တစ်ယောက် ပစ်သွားလို့အသဲကွဲတယ် ဆိုတာ ကိုယ့်အတွက်တော့ ရယ်စရာပါ ။ ကိုယ်က အချစ်ကြီးသလို အစွဲလန်းကြီးတယ်။ သစ္စာတရား ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့အသက်လို တန်ဖိုးထားတာ ။ ကိုယ့်အချစ်မေတ္တာကို အောက်တန်းစား အဆင့်နဲ့လာအသုံးချသွားရင်လည်း သေတောင် ခွင့်မလွှတ်ဘူး။ ဒါ ကိုယ့်တန်ဖိုးလေ ။ ကိုယ့်ကိုယ်အပေါ်ယံနဲ…Read more →
ရည်းစားဟောင်းနဲ့ ဘာဖြစ်လို့ သူငယ်ချင်းအဖြစ် ဆက်မနေနိုင်တာလဲ သမီးရည်းစားအဖြစ်က ပြတ်စဲပြီးရင် သူစိမ်းတွေ ဖြစ်သွားပါတယ်။ ရင်းရင်းနှီးနှီးပြန်နေတယ်ဆိုတဲ့ လူတွေကတော့ ရှားပါတယ်။ အရမ်းရင်းနှီးတဲ့သူတွေကနေ သူစိမ်းပြင်ပြင်တွေ ဖြစ်သွားကြတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေရှိပါတယ်။ 1. ရည်းစားဟောင်းနဲ့ သူငယ်ချင်းဆက်ဖြစ်နေတာက သူမရှိဘဲ သင်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာကို သူသိအောင် ပြသနိုင်မှ အဆင်ပြေပါမယ်။ သူထွက်သွားပြီးတဲ့နောက် သင်က ခက်ခဲစွာ ဖြတ်သန်းနေရရင် သင့်ဘက်က ရှုံးနိမ့်သလို သင်ခံစားရမှာပါ။…Read more →
လက်သန်းမှာ လက်စွပ်ဝတ်ခြင်းရဲ့ အဓိပ္ပာယ်
လက်သန်းမှာ လက်စွပ်ဝတ်ခြင်းရဲ့ အဓိပ္ပာယ် လက်သန်းကြွယ်မှာ လက်စွပ်ဝတ်ထားတဲ့ အဓိပ္ပယ်ကိုတော့ သိကြပေမယ့် လက်သန်းမှာ လက်စွပ်စွပ်ထားတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကိုတော့ သိရှိသူနည်းပါတယ်။ လက်သန်းမှာ ပန်းရောင်လက်စွပ်လှလှလေး ၀တ်တာဟာ ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ကိုဆောင်သလဲဆိုတာ သိပါသလား။ အဲဒီလို လက်သန်းမှာ လက်စွပ်ဝတ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်က သင်ဟာ Single ဖြစ်တယ် တခြားသူထက် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပိုချစ်တယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဂုဏ်ယူတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကိုဆောင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုလက်စွပ်ကို ရွှေရောင်၊ ငွေရောင်၊ အ၀ါရောင်၊…Read more →
သွေးတိုးရောဂါရှိသူများေ​ဆာ​င်း​ရာသီ​မှာ ၀မ်းချုပ်လျှင် သတိထား​စရာ…
ရထားလမ်းဘေးမှာ ဆယ်ဖီဆွဲရင်း အဖြစ်ဆိုးနဲ့ ကြုံခဲ့ရတဲ့ ကောင်မလေး…
ရင်းနှီးငွေထက် အဆပေါင်းများစွာ အမြတ်ပြန်ရခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယရုပ်ရှင် ( ၁၀ ) ကား
အမွှာလေးတွေရဲ့ ဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ြုပီး ပြောပြလာတဲ့ မေမေ ချစ်သုဝေ…